We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သားငယ် ကိုထိန်လင်း ရွှေတိဂုံဘုရားဖူး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ သားငယ် ကိုထိန်လင်း ရွှေတိဂုံဘုရားဖူး
ဒီရေ မှ ကူးယူတင်ဆက်ပါသည် (http://www.deyea.org)
အမေစုတို့ သားအမိကို ဘေးက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ်. ဒါပေမဲ့ လူမမာတွေလို တချိန်လုံး လက်တွဲထားတာကတော့ သူတို့ စိတ်ကျဉ်းကျပ်စေမလားပဲ.. တစုံတခု ဖြစ်လာရင်လဲ ခုလို ဘေးက လက်တွဲထားတာက အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်....
ဘေးက ခြံရံထားယုံဆို ပိုအစဉ်ပြေမလားလို့ပါ.။
24 November 2010 at 02:16
“ကျမ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ကျမ အမြဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ပြည်သူရဲ့အင်အားကို အားကိုးပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေတာလို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြည်သူရဲ့အင်အားကို စနစ်တကျသုံးမှပဲ ထိရောက်မှာပါ။ ပြည်သူတွေကို ထပ်ပြီးမှာပါရစေ။ ကိုယ်လိုချင်တာကို မျှော်လင့်နေရုံနဲ့ မအောင်မြင်ပါဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင်လုပ်ကြမှ၊ လုပ်ရဲမှ၊ လုပ်နိုင်မှ ရမယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို ရှာရမယ်’’
We have already vote to NLD 2000.NLD has to do it.i dont want to see the dead people on the street again.Thats enought for non violent.i will not march on the street for nonviolent because its doesent work.we have already given many life on the street and in jails for nonviolent.need to find other way.
24 November 2010 at 03:43
I m so happy and peaceful for mother su .. and really really happy. And i LOVE you mother. And Take care everything mother.
25 November 2010 at 09:53
nice one, ko moe thee.. Check it out...
အော်..ကိုယ့်မိသားစုတော့ ကိုယ် စိတ်မပူဘူး..သူများ သွားပြီး စိတ်ပူနေလိုက်ကြတာ...မွေးရကျိုးတော့ နပ်တော့မှာပဲ...